War deg deg ah: qabqablayaashii dagaalka oo dib ula waregayo xarumahii ay horey ugu sugnaan jireen kedib.
Posted by admin on August 06 2011 22:53:44
Mogdisho:- Qab qablayaashii dagaalka oo goobahii ay magaalada Mogdisho kaka sugnaayeen Shabaab ku soo laabanaya maalmaha soo socda arintaasi oo ay ka caawinayaan sarakiil Shabaab ka tirsan oo ay isku beel yahiin. war bixin
Mogdisho:- Qab qablayaashii dagaalka oo goobahii ay magaalada Mogdisho kaka sugnaayeen ku soo laabanaya maalmaha soo socda arintaasi oo ay ka caawinayaan sarakiil Shabaab ka tirsan oo ay isku beel yahiin.
kedib jabkii guud ee soo gaaray Shabaab ayaa waxaa magaalada Mogdisho ka socda caawa qorshe ay dib ugu qabsanayaan qabqablayaashii dagaalka ee ka talin jiray Mogdisho ka hor intii aysan kala wareegin maxkamadahii. xiligii qabqablayasha waxaa hubkooda kala wareegay wadaado qabiilkooda ah iyadoo ay hada doonayaan in iyagana markooda lagu wareejiyo.
Baabuuro dagaal oo ay lahaayeen hogaamiya kooxeedyadii Mogdisho oo ku xareysnaa xaafado ka mid ah goobaha ay maamusho Amisom ayaa ku sii qulqulaya degaano ay ka mid ayhiin yaaqshiid iyo Dayniile halka ilaa suuqa xoolaha iyo Suuqa Bakaaraha uu la wareegay Indha cade oo ka mid ahaa qabqablayaashii dagaalka kedib markii ay halkaasi u baneeyeen ciidamo ay beel ahaan wadaagaan oohalkaasi kusugnaa.
Xaalka Mogdisho waa Faanoole Fari kama qodna hadii aan xaqiiqada jirta iyo sasaanka caawa magaalada ka muuqda leyska indho tireyn ayuu yiri oday Hasan oo dadka Mogdisho ka mid ah.
Arintani maahan mid ay wax ka qaban karaan hogaamiyaasha koofurta Somaliya ee ku sugan Mogdisho siiba labada Shariif iyo xulufadooda.